Kitra – «Can 2019»: kameroney no hitsara ny lalaon’ny Barea sy i Tonizia, anio | NewsMada
Kitra – «Can 2019»: kameroney no hitsara ny lalaon’ny Barea sy i Tonizia, anio
Pejy vaovao eo amin’ny tantaran’ny Barea de Madagascar, ny hiatrehany ny ampahefa-dalana, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2019”, taranja baolina kitra. Hametraka fanamby ry zalahy, handresena ny Voromaherin’i Tonizia.
Hitodika ao amin’ny kianja Akademia Miaramilan’i Le Caire, avokoa ny sain’ny Malagasy rehetra, amin’ity alakamisy ity, eo amin’ny fiatrehana ny dingana ampahefa-dalana, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra “Can 2019”. Ho fantatra anio, mantsy izay hiatrika ny manasa-dalana, eo amin’ny Barea de Madagascar sy ny Voromaherin’i Carthage –n’i Tonizia.
Araka ny fantatra, mpitsara kameroney, Alioum, no hitsara ny lalaon’ny roa tonta, amin’ity. Ry zareo Kameroney, izay efa tsy milalao intsony, amin’ity “Can 2019”, ity. Manahy mafy ny Malagasy, ny amin’ny mety ho fisian’ny fitongilanana satria tsy tsara loatra ny fifandraisan’i Ahmad, filohan’ny Caf, sy ry zareo Kameronina, indrindra fa ny filohan’ny Caf teo aloha, Issa Hayatou.
Na izany aza, misy ny “video arbitrage” (Var), hijery ny fizotry ny lalao raha toa ka misy ny tsy mety, eny ambony kianja na ny fitongilanana, ataon’ny mpitsara. Ilay Frantsay, Benoit Millot, no hisahana ity Var ity. Izy izay efa nampiasa izany, tamin’ireo fihaonana tamin’ny “Ligue 1” frantsay, nanomboka ny taona 2011. Tsiahivina fa efa nitsara lalao iray tamin’ny “Euro 2016” koa izy sy “ligue des champions” ary fihaonana 9, tamin’ny “Europa League”.
Vonona tanteraka ny Barea de Madagascar, hiatrika an-dry zareo Tonizianina. Ekipa tsy zoviana amin’ny Malagasy intsony satria efa nifandona tamin’i Madagasikara, tany aloha tany. Efa nisy mihitsy ny fotoana nandresen’ny Malagasy azy ireo, tamin’izany.
Tamin’ity, ekipa anisan’ny sahirana vao tafavoaka tao anaty sokajy nisy azy ny Tonizianina, satria tsy nahita fandresena mihitsy raha tsy teo amin’ny dingana ampahavalon-dalana. Midika izany fa firenena azon’ny Barea de Madagascar, resena tsara, saingy ilaina fahamailoana satria manana mpilalao mahay mandaka lavitra sy fetsy izy ireo.